Ihe kacha mma 24 Jikọtara Atụmatụ Echiche Ebumnuche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kachasị mma 24 na-atụ aro Idepụta Atụmatụ Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Mgbe ị na-eche ma ị ga-enweta ụdị egbu egbu, enwere ihe ndị ị ga-atụle tupu ịbanye. Ụdị imewe ịchọrọ na ụzọ ịchọrọ ka a na-egbu egbu bụ ụfọdụ n'ime ihe ị ga-ebu ụzọ tụlee.
1. Ntuzi Ejiri Ejikọta Maka Di na Nwunye
2. Ụdị egbu egbu mara mma
Ị nwere ike ịnweta akara akara na ndị enyi na ọbụna ndị òtù ezinụlọ. Ịma mma nke igbu egbu egbu bụ ụzọ ha na-ele anya mgbe ị na-ahụ ha na ahụ. Ị nwekwara ike ịnwe ntinye aka n'akụkụ ọ bụla nke ahụ gị.
3. Ụdị egbu egbu yiri mma
Ụmụ nwanyị nwere ike igbu egbu egbu a. Ọbụna ndị bụ di na nwunye nwere ike ịnwe ụdị nke a na-eyiri ya iji hụ mma na nkekọ.
4. Ụdị egbu egbu na-atụ egwu
Ụmụ nwanyị nwere ohere ka mma mgbe ha nwere tattoos yiri nke dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị na-eche na #design iji mee ka egbukepụ gị pụrụ iche pụta lovelier.
5. Nnukwu egbu egbu
Ihe kachasị mkpa ị ga-atụle ma ọ bụrụ na nke a bụ akpụkpọ ụkwụ mbụ gị yiri ya mara mma.
6. Ụdị egbugbere ọnụ
7. Mara mma igbu egbu
Maka ụfọdụ ndị, ha na-achọpụta ihe pụrụ iche nke ga-enyere ha aka ka ha dịkwuo mma. Ozokwa, egbu egbu a na-ejikọta aka na-enyere ha aka ịnọ n'ìgwè ahụ mgbe a hụrụ ha ọnụ.
8. Ụdị egbu egbu pụrụ iche
Mmadụ ole na ole na-echeta akara aka mgbe ha furu efu onye nwere ihe dị mkpa ná ndụ ha. Ndị ọzọ ndị ọzọ nwere ike ịmepụta mkpịsị aka iji cheta otu oge na ndụ ha.
9. Na-eme ka igbu egbu egbu
E nwere oge mgbe anyị chọrọ ka anyị na ibe anyị dịkwuo ná mma. Mgbe anyị nwere egbu egbu yiri nke a, onye ọ bụla ga-achọ ile anyị anya. Nke a bụ ịma mma nke inwe akpara aka
10. Ụdị egbu egbu yiri ya
Ụdị egbugbere ọnụ yiri nke a pụtara na ị nwere ezigbo anya maka ihe ọma. Dịka onye na-emepụta ejiji, ọ dịghị ihe ọ bụla dịka ịchọta ụdị egbu egbu a.
11. Ụdị egbu egbu dị egwu
12. Ụdị egbu egbu Chic
Ị ga-ahụ onye ọ bụla na-ele gị anya mgbe ịnwere ụdị egbu egbu yiri nke ahụ ga-enyere gị aka ịpụ n'ebe ọ bụla. Uche ahụ dị iche iche na ihe niile gbasara egbu egbu ahụ dịkwa jụụ. Ị naghị eche otú ahụ?
13. Mara mma igbu egbu
Maka mmadu ole na ole, ha enweghi ihe ichotara ihe ndi echere site na ulo oru igbu egbu. Ha nwere echiche a n'isi ha na ebe ndị na-egbu egbu egbu bụ obere ụlọ ahịa ndị na-enye ndị na-anya ụgbọ mmiri na ndị na-agba ịnyịnya ígwè ebe ha nọ. Otú ọ dị, site na igbu egbu egbu a dị mfe, ị ga-aghọta ihe ọ pụtara inwe oke egbu egbu.
14. Ụdị egbu egbu tiri
Ị hụla ndị nwere ụdị egbu a? Mgbe ịchọrọ ile egbu egbu na-egbu egbu, ị ga-achọ nhazi nke mara mma dị ka nke a. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ narị mmadụ ji eji egbu a eme ihe ugbu a.
15. Ụdị egbu egbu dị oke
Eziokwu nke okwu ahụ bụ na ọnọdụ dị iche. Ndị mmadụ si n'ụdị dịgasị iche iche na-enweta tattoos dị ka nke a ka ha wee dịkwuo mma. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị onye mmekọ, ị ka nwere ike ịnweta egbu a na onye ọ bụla na-ekwu banyere ya, ụdị igbu egbu.
16. Ụbụrụ enyi na-adaba
Mmadụ ole na ole abanyela na-egbu egbu ma hụ ndị mmadụ bụ ndị nkụzi, ndị uwe ojii na ndị nlekọta ahụike na-enyocha. Otú ọ dị, mgbe ha na-ahụ akara aka, ha dị njikere ịgba mbọ na-egbu egbu.
17. Ụdị igbu egbu na-akwado
Ị hụrụ egbugbu a n'anya n'ọtụtụ n'ime ogige ndị ị gara? Ụdị igbu egbu aghọwo ihe okike n'ihi ụzọ ndị na-ese ihe si achọpụta na ụdị ọkpụkpọ ọ bụla yiri nke dị iche ma dị jụụ.
18. Ejiri akpa aka
19. Ụdị ụdị egbu egbu
Inwe ụdị igbu egbu ejighị ya. N'oge gara aga, ndị mmadụ na-ajụ ọrụ ebe ọ bụ na ha nwere tattoos, ma ọ bụghị nke ahụ ka ọ dị. Otú ọ dị, mkpịsị aka na-ejikọta aghọwo otu n'ime akwara mara mma.
20. Ụdị egbu egbu
Òtù ole na ole nwere ike ịchọ ka ị kpuchie ya, mana, ha ga-ahapụ gị ịrụ ọrụ ebe ọ bụ na ị nwere egbu egbu. Ndị njikwa ole na ole agaghị aza ajụjụ ahụ na nzukọ. Ọ bụrụ na ịnwere ụdị ụdị igbu egbu, ọ nwere ike kpuchie ya.
21. Ụdị egbu egbu nke ụkwụ
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche igbu egbu ma ị maghị ihe na-echere site na ụlọ ahịa igbu egbugbu, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụgharị n'ihu iji nweta data niile ị chọrọ. Ngwakpo aka na-ejikọta bụ ụfọdụ n'ime njirika kachasị mma na ijikọ ọnụ nke i nwere ike iji.
22. Okpokoro egbu egbu
23. Ụdị igbu egbu ọnụ
24. Obere egbu egbu
na-egbu egbuegbu egbu egbumma tattoosmehndi imeweenyi kacha mma enyiEgwu ugoenyí egbu egbuegbu egbu diamondỤdị ekpomkpaakara ntụpọọnwa tattoosUche obiaka akaọdụm ọdụmdi na nwunyengwusi pusikoi ika tattooAnkle Tattoosarịlịka arịlịkaima ima mmaaka mma akaegbu egbu osisi lotusazụ azụna-adọ aka mman'olu oluudara okooko osisiụkwụ akaụmụnne mgbuakwara obirip tattoosegbu egbu hennaegbugbu egbugbuzodiac akara akaraaka akaegbu egbu okpundị mmụọ oziNtuba ntughariegbugbu maka ụmụ agbọghọndị na-egbuke egbukeegbu egbu mmiriechiche egbugbuokpueze okpuezennụnụegbu egbu maka ụmụ nwokeagbụrụ eboegwu egwuakpị akpịegbu egbuegbu egbu ebighi ebiGeometric Tattoos